Waxaan maanta akhristayaasheena ugu talo galnay heeso qoraal ah oo macaan sida heeso jacayl ah, todobaadkii hore waxaan ku soo qaadanay qormadeena hees jacayl qoraal ah ama aan iraahdo heeso qoraal ah oo kala duwan weliba heeso xul ah qaraami ah sida Cumar Dhuule, Hanuuniye, Nimcaan Hilaac, Yurub Geenyo, Bk, Cawaale Aadan, Lafoole, Maxamed Saleebaan Tubeec. Heesuhu waxa ay intooda badan ahaayeen kuwo ku saabsan amaan dumar.
Maanta waxaa miiska inoo saaran hees qoraal ah oo jaceyl taasoo ay ku luuqeyneyso fanaanada caanka ah Binti Cumar Gacal. Heestu waa heestii Barbaarta yarkaan ka eegtay.
Waxaan sidoo kale akhristayaasha sharafta leh ee ku xiran shabakada somger.com ugu talo galnay in aan ka haqabtirno erayo jaceyl ah, heeso qoraal h, fariimo jaceyl, nolosha qoyska.
Heeso qoraal ah waxa ay kuu fududeynayaa fahamka heesta adigoon maqal iyo in erayada macaan aad ku raaxeysato sababtoo ah marmarka qaar waxaa dhacdo in aadan heesta si fiican u fahmin sidaaa darteed waxaan kuu fududeyneynaaa qorida heeso qoraal ah.
Waxaan todobaad walbaa ku soo qaadan doonaa heeso qoraal ah oo jacayl ah ama heeso qaraami ah.
Kuuma soo bandhigi doono heeso qoraal ah oo keliya ee waxaan ka hadli doonaaa taariikhda iyo faahfaahinta hees Walba.
Sidoo kale waxa ay somger.com kula wadaagi doonaan erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh, geeraar amaan ah iyo sheekooyin qosol badan. Haddii aad xiiseyneyso oo aadan aqoonin halkaan hoose ka baro:
Shukaansi Jaceyl oo cajiib ah
Hees jacayl qoraal ah:
Faanaanada caanka ah Binti Cumar Gacal - Heestii Barbaarta yarkaan ka eegtay..
Barbaarta yarkaan ka eegtay Yarkii isha iigu baaqay Yarkii caashaqan an beerne Anigu baar baan ku raacay
Anoo Baladxaawa jooga Muxuu Bari iiga yeeray Kolkaan Boosaaso gaaray Muxuu burco iiga heesay
Anoo Beer sii maraaya Hadduu badda doon ka raacay Inuu been ila jilaayey Adaa Boqorow ogaaye i-Bixiyow iga badbaadi Haddaan bogsadoon ka reysto Sidaan uga booday caashaq’ Jacaylba haddaan u booyo Haddaan nin dambow baroorto Haddaan “Baxsanow” iraahdo Aniga balaayaba hayga raacdo!
Baxdowga yarkaan u qaatay Jacaylkii berisamaadka Bishaarada iigu yeedhen Bilkhayrkana ugu jawaabay
Yarkii bogga ii fadhiistay Yarkii beerkayga saaqay Yarkii bogga ii salaaxay Inaanan baraarugeynin
kolkuu ka bogtuu ogaaday Hadduu baddal iigu jiiday Inuu been ila jilaayey Adaa Boqorow ogaaye I-Bixiyow iga badbaadi Haddaan bogsadoon ka reysto Sidaan uga booday caashaq’ Jacaylba haddaan u booyo Haddaan nin dambow baroorto Haddaan “Baxsanow” iraahdo Aniga barwaaqaba hayga raacdo!